डाट्सनले नेपाली बजारमा भित्र्यायो नयाँ ‘रेडि–गो’, के के छन् विषेशता ? - आर्थिक पाटी
डाट्सनले नेपाली बजारमा भित्र्यायो नयाँ ‘रेडि–गो’, के के छन् विषेशता ?
२०७७-०६-२६ बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । डाट्सनले आफ्नो नयाँ गाडी रेडी–गो नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । यो नयाँ रेडि–गो गाडी स्पोर्टी तथा प्रोग्रेसिभ गाडीमा विभिन्न प्रिमियम एवं फिचरहरुले भरिपूर्ण सुविधाहरु रहेका छन् । यसले वास्तवमै बोल्ड एवं नवीनस्तरमा पुर्याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
हेचब्याकको स्लीक एवं बोल्ड लुक्सको साथ पूूर्ण क्रोम सराउन्डको साथ परिभाषित गरेको छ भिज्यूअल अपिलिङ्गको लागि एल सेप मीआरएलएस, स्लिक हेडल्याम्प्सको साथ सिल्भर डेकोरेशन, एलइडी फग ल्याम्प, १४ इन्च ह्वीलको साथ पेटेनेवल ड्युल टोन ह्वील कभर, एलइडी सिग्नेचर टायल ल्याम्प तथा डोर ट्रिम र फेब्रिक जस्ता सुविधाकरु समावेस गरिएका छन् ।
सार्वजनिक भएको उक्त गाडीको मूल्य नेपाली बजारमा २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । निशान ईन्डिया अपरेसनका अध्यक्ष सिनान् ओजक्कोकका अनुसार नयाँ डाट्सन रेडी(गो स्ट्रङ भ्याल्यू पोजिसनको साथ उच्च गुणस्तरीय उत्पादन रहेको छ ।
यो जापानिज प्रविधिद्वरा निर्माण गरिएको छ, यसमा सेगमेन्ट लिडिङ सुविधाहरु विद्यमान् रहेका छन् । यसमा भएका सुविधा एवं विशेषताहरुले आजका युवा वर्गका अधिकांश आवश्यकताहरुलाई सहजै पूरा गर्नेछन् ।
डाट्सनको भ्यालु पोजिसनलाई अझै विस्तारित गरी प्रोग्रेसिभ मोविलिटीलाई बढाउँदै गइरहेको उनले बताए ।
सर्वोत्कृष्ट सुविधा एवं स्वामित्व
हेचब्याकमा १८७ एम एम को सेगमेन्ट लिडिङ्ग ग्राउण्ड क्लियरेन्स तथा क्लास लिडिङ्ग रियर नि रुम कम्फोर्टले सेडानको जत्तिकै सुविधा उत्कृष्ट सुविधा प्रदान गर्दछ । यसमा एउटा आरामदायी एवं भरपर्दो ड्राइभ अनुभव मिल्दछ । नेपाली सडकहरुलाई सुहाउने किसिमले तयार पारिएको हुँदा यो गाडीले हरेक दृष्टिकोणबाट यात्रालाई सहज तुल्याइ दिन्छ ।
नयाँ रेडि(गोमा वेस्ट इन क्लास फिचरहरु रहेका छन्ः यसमा ८ इन्चको टच स्क्रीन, एडभान्स एण्ड्रोइड तथा एप्पल कार प्ले मार्फत् सहजै सञ्चालन गर्न सकिने भ्वाइस रिकग्निसनयुक्त इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि रहेको छ । प्रिमियम गन मेटल फिनिसिङ्गको साथ अनबोर्ड एक ड्युल टोन इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल पनि रहेको छ ।
यस कारमा यो सेगमेन्टकै उच्चस्तरीय सुरक्षाका उपायहरु समावेश गरिएको छ । ठूलो दृर्घटनाबाट बच्नको लागि त्यसै किसिमको बढी स्टक्चर राखिएको छ, जसले यात्रुलाई अगाडिबाट हुने चोटबाट बचाउँदछ । त्यस्तै यसमा साइट इम्पेक्ट पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्सन कम्प्लान्ट, रेक्ट्य्राक्टिभ फङ्सनको साथ रियर सिट वेल्ट, डुअल एयर ब्याग तथा प्रोजेक्सन गाइडको साथ रियर भ्यू क्यामरा पनि रहेको छ ।
यो चाडबाडको मौसममा नयाँ रेडि–गो १.० एल म्यान्युअल ट्रान्समिसन उपलब्ध हुने छ । त्यसै गरी अन्य ०.८ एल म्यान्युअल ट्रान्समिसनको डि, ए, ६ तथा टि (ओ) तथा १.० एल पनि उपलब्ध रहेका छन् । त्यसै गरी स्मार्ट ड्राइभ अटो (ब्ःत्) त् (इ) को भेरियन्ट पनि छिट्टै उपलब्ध हुनेछ ।
नयाँ रेडि–गो दुई नयाँ रंगको साथ जम्मा छ वटा रंगहरुमा उपलब्ध रहेको छ । स्यान्डस्टोन ब्राउन (नयाँ) भिभिड ब्लु (नयाँ), ब्लेड सिल्भर, ब्रोन्ज ग्रे, ओपल ह्वाइट तथा फायर रेडमा यो गाडी उपलब्ध रहेको छ ।
डाट्सनले १ वर्षको वा २० हजार किलोमिटरको स्ट्यान्डर्ड वारेन्टी उपलब्ध गरेको छ र यो प्रवर्धनात्मक अवधिमा खरिद गर्नुहुने ग्राहकहरुलका लागि भने विना अतिरिक्त शुल्क ३ वर्ष वा ३० किलो मिटरसम्म वारेन्टी प्राप्त हुनेछ । त्यसै गरी खरिद कर्ताले चालु आवको सवारी कर तथा काठमाडौं उपत्यका भित्र रोडसाइट सेवा पनि प्राप्त गर्नुहुने छ ।
ड्याट्सन गाडीको बारेमा
नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले नेपाली बजारमा विश्वको तेस्रो ठूलो ब्राण्ड निशान तथा इन्फिनिटि जस्ता गाडीहरु विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
सन् २०१२ मार्च देखि डाट्सनले विस्तारित बजारमा आफ्ना विभिन्न मोडलहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ८० वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको डाट्सन गाडी जापानिज प्रविधियुक्त गाडी हो र यो निशानको एक हिस्सा पनि बनेको छ । डाट्सन गाडी भारत, इन्डोनेसिया, रसिया तथा साउथ अफ्रिका जस्ता देशहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दै आएको छ ।
आजका युवा पिँढीको आवश्यकतालाई मध्यनर गरी उनीहरुका आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्य सहित यस गाडीको निर्माण गरिएको छ । शक्तिशाली जापानिज इन्जिन जडित यस गाडीमा सेफ्टी एवं ड्राइभिङ्गको जीवन्त अनुभव प्राप्त गर्न सकिने छ ।
आकर्षक डिजाइन, तथा अद्वितीय विशेषतायुक्त डाट्सन गाडीका आफ्नै विशेषताहरु विद्यमान रहेका छन् । ग्राउन्ड क्लियरेन्स, सेफ्टी तथा स्टोरेज जस्ता अत्यावश्यकीय सुविधाहरु यस कारमा रहेका छन् ।
डाट्सनको इतिहासका बारेमा
करिव एक शतक वर्ष अगाडि १९१४ मा जापानमा स्थापना भएको थियो । ड्याटको शाब्दिक अर्थ जापानिजमा शीघ्र रुपमा चम्कनु भन्ने हुन्छ । यसको पहिलो अक्षरले तीनजना वित्तीयकर्ताहरु को थरबाट राखिएको हो । डेन, आयोमा तथा ताकेयुचीको पहिलो अक्षर मिलाएर बनाइएको हो ।
यही अक्षरहरुको संयोजनमा ड्रुबल, एट्र्याक्टीभ तथा ट्रस्टवर्दीका ३ वटा विशेषताहरुको छोटोकरीको रुपमा पनि लिइएको छ । सन् १९३३ मा निशान गाडीका मालिक योशिशुके आइकावाले मोबिलिटी फर अल भन्ने मान्यताका साथ आफ्नो व्यापार समाले पछि सस्तो एवं बलियो गाडिहरुको निर्माण गर्न थालियो ।
यसपछि ड्याटका छोरोको रुपमा जापानिजहरुले ड्याट सनलाई लिने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यो ड्याट सनको रुपमा प्रचलित भई व्यापक रुपमा उत्पादन प्रारम्भ गरेको इतिहास रहेको छ ।